संकटको बेलामा थाह हुन्छ देशभक्त नेता को हो? – Karnalisandesh
संकटको बेलामा थाह हुन्छ देशभक्त नेता को हो?
प्रकाशित मितिः २८ बैशाख २०७७, आईतवार २०:०२ May 10, 2020
काठमाडौँ। यतिबेला विश्व मानव समूदाय कोरोनाबाट त्राहिमाम बनेको छ। तर, हाम्रो देशमा घटिरहेका राजनीतिक तथा अन्य घटनाहरुले कोरोनाको कहरलाई फिक्का बनाइरहेका छन्।
केहीदिन अघि सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्यायो। संवैधानिक आयोग र दलविभाजन सम्बन्धी ती अध्यादेश निक्कै विवादमा परेपछि फिर्तासङ्गै खारेज गरिए।
जुन मुद्दामा सरकार नराम्रोसङ्ग चुक्यो। आजसम्म पनि सरकारको उक्त स्वेच्छाचारी कदमलाई लिएर राजीनामासम्म माग्न थालिएको छ। फिर्तासँगै खारेज भएका अध्यादेशका कारण सरकारी नेकपाभित्र चर्को रडाको जारी छ।
यसैबेला गत शुक्रबार देशको मुटु बानेश्वरको संसद भवनमा बजेट अधिबेशन सुरु भएको थियो। सांसदहरुका गरमागरम तर्कले मिडिया तातीरहेको बेला एक्कासि सिंहदरवार अगाडिको सडकमा प्रहरी र चिनियाँ नागरिकबीच कुटाकुट भयो।
त्योसङ्गै भारतले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा करिब ८० किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको खबर आयो। यी दुई विषय अहिले सामाजिक संजालमा निक्कै चर्चामा छन्।
चिनियाँ नागरिकहरुको मागअनुसार उनीहरू आफ्नो दूतावास जानुपर्ने हो। तर, निषेधित क्षेत्रमा किन पुगे? उनीहरू परिचालित हुन् या के हुन् ? त्यसको बारेमा जानिन्छ या यसै छोडिन्छ? त्यो हेर्न बाकी छ। त्यसैमा प्रहरीमाथी उनीहरुले गरेको हर्कतलाई ठिक थिएन भन्नेहरू पनि छन्।
यता भारतीय दादागिरीका विरुद्ध पनि उत्तिकै आवाज उठेका छन्। तर, यसपालि भारतीय विस्तारवादी चरीत्र र हेपाह प्रवृत्तिका विरुद्धमा मात्रै आवाज उठेनन्। नेपाल सरकारको बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसले नागरिकहरुमा चेतनाको स्तर बिस्तारै उठ्दैछ भन्ने देखाउछ।
‘आफ्नो थैलो बलियो बनाउनु पर्छ, चोरको कुरापछि आउँछ’ भन्ने नेपालीमा मान्यता छ। नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएर पनि होला धेरै मानिसहरुले उनको परिक्षाको घडि आएको बताउन थालेका छन्।
भारत सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गरिएको धार्चुला, नेपाली भूमी लिपुलेखहुँदै चिनको मानसरोवर जोड्ने सडकका बारेमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन।
तर, राष्ट्रवादी दरिएका ओली सरकारले जान्दाजान्दै भारतसङ्ग किन उचित वार्ता गरेन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। भनिन्छ त्यो सडक आजभन्दा १० बर्ष पहिले नै सर्बे भएको थियो! आजभन्दा ६/८ महिना पहिले पनि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि चर्की बिरोध भएको थियो। भनिन्छ, त्यो बेलामै यस सडकको बारेमा सरकार जानकार थियो।
त्यो बेलामा भारतको विरोध भयो। तर, सरकारको खासै बिरोध भएन। यसपटक सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सेना, प्रहरी सबैमाथी प्रश्न सोझिएको छ। अरुलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले हाम्रा साशकहरुको चरित्रमाथी संसय पैदा भएको छ। भारतसँगको सीमा विवाद अन्त्यका निम्ति वार्ता, कुटनैतिक पहल थाल्न सरकारलाई नागरिकहरुले सुझाव दिएका छन्।
कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र र असजतामा परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्दार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निरन्तर घचघच्याइ रहेकी सामाजिक अभियन्ता रेखा थापाले देशको रक्षाका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएकी छन्।
गत शुक्रबार (वैशाख २६ गते) भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको भारतको धार्चुला, नेपालको लिपुलेखहुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भलाई नायिकासमेत रहेकी थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेकी छिन्, ‘सिमा अतिक्रमण भएको बेला जनता र राजनीतिक शक्ती एकजुट हुनु पर्दछ। जुनसुकै मुल्यमा आफ्नो सिमा रक्षा गर्नु हाम्रो पुस्ताको दायित्व हो। कुनै पनि प्रकारको आत्मसमर्पण अक्षम्य हुनेछ। ‘
नायिका थापाले देशको एकचिप्टि माटो मुटुभन्दा प्यारो हुने बताएकी छन्। उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रियता कसैलाई सरकारमा पुर्याउने भर्याङ होइन। कसैको राजनीतिको भजन होइन। यस्तो बेला लिने अडानले देखाउँछ क—कस्को दावी खोक्रो छ? कस्को अडान देशभक्तिले भरिएको छ ?